DAAWO:- Meydka Nin la Gowracay oo indhahana laga saaray oo lagu arkay Muqdisho(YAAB) | allsaaxo online
DAAWO:- Meydka Nin la Gowracay oo indhahana laga saaray oo lagu arkay Muqdisho(YAAB)
Barqa nimadii maanta waxaa degmada Dayniile xaafad katirsan lasoo dhigay meydka nin oday ah oo laga saaray labada indhood sidoo kale jirkiisa gaar ahaan qoorta ay ka muuqato qaliin in lagu sameeyayay.
Ninka lasoo dhigay degmada ee uu ka muuqdo qowraca ayaa lagu qiyaasay da’a ahaan 40 jir, kaasi oo wali la la yahay cid garata meydkiisa ama sababta ka danbeysa qowraca ninkaasi odayga ahaa.
Goobjoogayaal ku sugan degmada Dayniile oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay iney aad uga arga gaxeen meydka ninka qowracan ee degmada lasoo dhigay , iyo eheladda marxuumka oo la la yahay.
Laamaha amaanka dowladda ee degmada deyniile ayaa gaaray goobta ninka la qalay lasoo dhigay.
”Meydka barqadii maanta ayaan ku aragnay isaga oo meel cidlo ah dhax yaala, waan ka argagaxnay waana garan weynay ninkaasi, waxa uu xirnaa Jaakada Calanka Soomaaliya iyo buumo kaliya, hada meydka waa la qaaday ciidamaa u yimid” Ayuu yiri mid kamid ah dadka deegaanka.
Waxaa la is weydinayaa gudaha magaalada muqdisho arintaan naxdinta leh ee lagula kacay ninka odayga ah, maadaama jirkiisa lagu arkayay qowrac ama qaliin sido kale laga saaray labadiisa indhood, muqdisho ayaana inta badan dadka la qabsadeen dilalka, walow arintaani ay tahay mid aad looga naxay.